muva Yikuphi sekuthandwa kakhulu imihlobiso Buddhist ukuheha hhayi kuphela izinkanyezi, kodwa futhi abantu Ukugunda. Futhi ngakho craftswomen, ikakhulukazi labo ziyazithanda aluka lesikhumba noma Macramé, ongazithanda inqubo elula sendlela sifake a isongo "Shambala".
An ifilosofi-accessory kwengqondo
Lokhu jewel kufikile emhlabeni fashion inkolo ivumelane kakhulu ukuthula, inkolo yokuzibona - nobuBuddha. Ngakho kufanele izilungiselele yokuthi "Shambala" namasongo, okuzokwenza sifake izinyathelo sabhala ngezansi - kuyinto inqubo okuthakazelisayo hhayi kuphela, kodwa futhi ithuba ukudala imihlobiso ukuqonda kwabo emhlabeni kwangaphakathi.
Nokho, kufanele ubuyele ngqo isongo. Umlando ka ukwelukwa namasongo "Shambala" buqala legend zombuso ngokuvumelana nokuhlakanipha. Ekuqaleni kwalo kwaba ngentambo elula lapho 9 aboshelwa ifindo. Kamuva 9 isebangeni therebetween ubuhlalu. Namuhla namasongo "Shambala" - kungcono umkhakha konke ekhombisa abanamathela ukudalwa okungase ongelutho.
Indlela sifake isongo "Shambala": Isinyathelo Sokuqala - intambo
Ukuze udale umhlobiso, akudingeki izifundo eziningi kangaka: enamafutha intambo ubude ngamamitha amathathu, iglu, ubuhlalu, isiqophamazwi sokulalela, surface bushelelezi futhi sikelo abukhali.
inqubo uqobo iqala neqiniso ukuthi intambo imiswe yizinqamu ezintathu alinganayo futhi baxhumana ifindo eqinile elula at ibanga ngamasentimitha 25 kusukela ekupheleni. Ngemva kwalokho, usebenzisa emapheshana ingcina kumele kuvikelwe kuya aphansi ingxenye flat surface. Indlela kakhulu efanayo ukwelukwa ifindo ulula. Okokuqala, udinga ukubeka imikhawulo okubi unxantathu. Ngaphezu kwalokho amahanisi abelethe kwesokudla noma kwesokunxele ngenhla isikhungo. Ngemva idluliselwa kwesokudla ngenhla isikhungo, ukubeka ngokunembile esiteji futhi ubambe ekupheleni kwesokudla amahanisi ngaphansi empambana kwesokunxele bese isikhungo, futhi qinisa semikhawulweni kwesokunxele nakwesokudla ku engeyokuqala eliyingqikithi isisekelo esilula.
Kodwa ukuze uthole engeyokuqala lesifanele, kufanele ubambe inqubo efanayo, kodwa ngeke adlale ehamba phambili kakade kushiya tourniquet. Eluka aluthola ukubukwa kudingekile ISIZINDA ezinjalo kudingeka wenze okungenani 4 izingcezu ke kungenzeka ukuba sifake ubuhlalu. Kuze kube yimanje, amahanisi emaphakathi vdevaetsya umhlobiso ozithandayo futhi ngaphansi kwalo udonsa uchungechunge elandelayo ISIZINDA.
Le nqubo iyaphindwa kuze obuphelele wayefisa isongo.
Eyesibili isinyathelo - ekupheleni kwesokudla
Ukuze isongo akalilahlile ifomu, kumele abethela kahle. Indlela sifake isongo "Shambala" ukuze emikhawulweni yaso akuzona ihlukile kuleyo ukuthi babiza umsebenzi Jewelers? Kulula. Kuze kube yimanje, womathathu aphethwe ndawonye ngentambo elula ifindo eqinile. Ngemva ngalo lisetshenzisiwe ingcina futhi bavunyelwe ukuba ome nhlangothi zombili.
Ngokulandelayo, ukusika ohlangothini izintambo, kusale kuphela isikhungo.
Isinyathelo Sesithathu - Buckle
Nokho, okubaluleke kakhulu kule nqubo ye indlela sifake isongo "Shambala" namanje wenziwa kahle ukuyona. Ukuze wenze lokho, udinga i-ikhebula obuphelele ezengeziwe ngamasentimitha amahlanu.
Imikhawulo asele zombili isongo kuthiwa sawela nomunye futhi abaphila isigaba esisha. Lokhu kulandelwa 4 sikwele ukwakheka inhlangano yabantwana bakwa-inqubo efanayo, lapho nokwelukiweyo ngaphambili, ezengeziwe donsa neengcezu kukhona sokunene nesobunxele ukwelukwa ngentambo.
On the central imicu main ihlanganisa ne ISIZINDA elula enamathiselwe ubuhlalu, ezizosebenza njengento esetshenziswayo ngesivalo fastener lapho isongo esigqokwa noma zisuswe.
Yilokho. Njengoba ubona, ukwenza isongo "Shambala" ulula!
Ukwenza origami elula - dragon izimpiko